Blaise Matuidi oo si weyn u amaanay qaab ciyaareedka xulka qaranka Peru, kadib kulankii ay wada ciyaareen – Gool FM
Blaise Matuidi oo si weyn u amaanay qaab ciyaareedka xulka qaranka Peru, kadib kulankii ay wada ciyaareen
(Russia) 21 Juunyo 2018. Xidiga khadka dhexe xulka qaranka France iyo kooxda Juventus Blaise Matuidi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay guushii ay gaareen labadii kulan ay ka ciyaareen koobka aduunka 2018 isla markaana ay u soo gudbeen wareega xiga.
Blaise Matuidi ayaa kadib guushii ay ka gaareen xulka qaranka Peru wuxuu la hadlay wargeyska “L’Equipe” wuxuuna kaga warbixiyay dareenkiisa guushii ay gaareen labadii kulan lasoo dhaafay.
“Waxaan ku qanacsanahay guushii aan gaarnay labadii kulan ee ugu horeysay, laakiin sidaas waan ka sii fiicnaan karnaa”.
“Waxaan u ciyaarnay si wanaagsan si aan guul u gaarno guul, laakiin waxaan helnay fursado yar qeybtii hore, taas bedelkeed, xulka qaranka Peru wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed fiican, sidaas daraadeed waxaan dareenay sida inaan ku ciyaareeno meel ka baxsan garonkeena”.
“Waxaan isku dayay inaan sameeyo wax walba si aan u caawiyo xulkeyga, waxaan diyaar u ahay inaan ka ciyaaro boos kasta, iyo daqiiqad kasta”.
Keylor Navas oo ka hadlay saxiixa goolhaayaha cusub ee kooxda Real Madrid
David Beckham oo saadaaliyay labada xul qaran ee gaari doonta finalka koobka aduunka 2018